विदेश जान छोडेर ७२ बिगाहमा केरा खेती ! ३ करोड बढीको कारोबार, छोरा भन्दा केरा प्यारो – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १ आश्विन बुधबार १४:३९
विदेश जान छोडेर ७२ बिगाहमा केरा खेती ! ३ करोड बढीको कारोबार, छोरा भन्दा केरा प्यारो
एजेन्सी, चितवन। चितवनका शंकर सुवेदी अगुवा केरा किसान हुन् । उनले चितवनमा ठुलो क्षेत्रफलमा व्यवसायीक केरा खेती गरीरहेका छन् । विदेश जाने सोचमा रहेका शंकरले व्यवसायीक रुपमा कृषी कर्म गर्न लागेका हुन् ।
चितवनका विभिन्न भागमा गरी जम्मा ७२ बिगाह क्षेत्रफलमा केरा खेती गरीएको उनले जानकारी दिए । शंकरले केरा खेती मात्रै गरेका छैनन्, चितवनमा उनले माछा पालन व्यवसाय पनि सुरु गरेका छन् । विदेश जान छोडेर कृषी कर्ममा लागेको पछुतो नभएको उनले बताए ।
आफ्नो ठाउँमा हुने कृषी खेतीलाई व्यवसायीक बनाउन सके पैसा कमाउन बिदेश जान नपर्ने उनको भनाइ छ । उनीसँग अन्य दुई जना मिलेर सामुहिक रुपमा केरा खेती गरेका हुन् । उनिहरुले केराखेतीबाट बार्षिक बिगाहको ५ लाख बढी कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
PREVIOUS Previous post: नवलपुर दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर
NEXT Next post: बजार : यस्तो छ आजको सुनको भाउ